साथीहरुलाई…..मेसीले आफ्नो डेढ अर्बको जेटमा…‘लिफ्ट’ दिदैँ….! – Gorkhali Dainik
October 7, 2020 632
अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेसीले आफ्नो विलासी प्राइभेट जेट अर्जेन्टिनाका टिम साथीहरुका लागि उपलब्ध गराउने भएका छन् । कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि भन्दै मेसीले आफ्नो प्राइभेट जेट उपलब्ध गराउन लागेका हुन् ।
अर्जेन्टिनाले आगामी खेलहरुका निम्ति खेलाडीहरुलाई यूरोपबाट आफ्नो देशमा यात्रा गर्न मेसीको जेट प्रयोग गर्नेछन् । मेसीले मार्कोस अकुना, लुकास ओकाम्पोस, पाउलो डिबाला, निकोलस ओटामेन्डी र जुआन फोयथसँग आफ्नो बिमान सेयर गरेका हुन् ।
मेसीले सन् २०१८ मा १ करोड ५० लाख डलर खर्चेर गुलफ्स्ट्रिम भी प्राइभेट जेट किनेका थिए । यसको निर्माण अमेरिकामा सन् २००२ मा भएको थियो । मेसीले प्रायः पारिवारसँग बिदा मनाउन यो जेट प्रयोग गर्छन् ।
मेसीको जेटमा १६ वटा सिटहरु छन्, जसलाई आठ वटा ओछ्यानमा परिणत गर्न सकिन्छ । यसमा दुई शौचालय रहेका छन्, जसमध्ये एउटामा सावरको सुविधासमेत छ । जेटिभित्रै दुईवटा भान्सासमेत छन् ।जेटको पुच्छरमा मेसीले नम्बर १० लेखेका छन्, जुन उनको जर्सीको नम्बर हो ।
Prevचालक अनुमतिपत्र…घर बसीबसी लिन चाहनुहुन्छ… ?
Nextज’न्मिदा छोरा….१७ बर्षमै स’र्जरीपछिका तस्विरले दुनियाँ मोहित….!